Hemp Seed Fiber | Seed Fiber | Hemp Plant - HelpMEHemp
ပင်မစာမျက်နှာ Hemp Seed Superfoods Hemp Seed Fiber
HelpMEHemp's® Hemp Seed Fiber သည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစက်ရုံအခြေပြုစူပါအစားအစာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဗီတာမင်များပြည့်နှက်သည်ighly အစာကြေနှင့်အီစထိုဂျင် mimickers အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဤဖိုင်ဘာသည်သင်၏သွေးအတွင်းသကြားဓာတ်ကို detoxify နှင့်ထိန်းညှိပေးပြီးနို့မဟုတ်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ၁ ဇွန်းတစ်ဇွန်းသာပရိုတင်း ၄ ဂရမ်ပါ ၀ င်ပြီးသင်၏နေ့စဉ်စားသုံးရန်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များအားလုံးသိမ်းဆည်းထားပြီးအရသာရှိပြီးအာဟာရအရသာရှိသည်။
စားသုံးခြင်း HelpMEHemp's® Hemp Seed Fiber သည်သင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည် အိုမီဂါ ၆-၃ (၃-၁) တွင်သဘာဝအမျှတဆုံးအချိုးအစားရှိသည်။ ဘယ်သူကမျှတမှုမရှိချင်ဘူးလဲ။
4 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ. ထင္ျမင္ခ်က္ေရးထားခဲ့ပါ။
ဘယ်တော့မှအသီးကိုဘယ်တော့မှမစားခဲ့ပါ။ ၁၅ နှစ်တာကာလတစ်လျှောက်လုံးဘယ်တော့မှမထိဘူး၊ ငါဟာသကြားအမျိုးအစားအားလုံးကိုမစားဘဲသွားပြီးအသီးကိုတောင်မလိုချင်ဘူးဆိုတာကိုသဘောမပေါက်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏သကြားစွဲလမ်းမှုကြောင့် ၀ မ်းနည်းမိသည်။ နံနက်တိုင်းလျှော်ရေစုပ်စက်ကိုဖိုင်ဘာထဲသို့ထည့်သည်။ ညနေတိုင်းအစာအာဟာရဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်အလိုဆန္ဒများကိုပျောက်ကင်းစေပြီးလျှော့ချရန်စတင်လုပ်ဆောင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရတာဝမ်းသာပါတယ် HelpMEHemp အခုသဘာဝသကြားကိုစားပြီးပျော်မွေ့ !!
ကိုယ်အလေးချိန်ဒီလျှော်ဖိုက်ဘာကိုသုံးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော့်မှာဖောင်းပွမှုပိုများလာပြီးအားအင်လည်းမပြည့်ဝတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ခံစားချက်ကပြောင်းလဲသွားပြီ။ ငါသည်ငါ့နံနက်ဖျော်ရည်, ဒါမှမဟုတ် oatmeal ထည့်ပါ။ ဒီမှာရှိတဲ့အာဟာရတန်ဖိုးအားလုံးကိုချစ်ပါ။ ငါရောနှောအချို့ကိုကြိုးစားရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ သင့်ထုတ်ကုန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဆီနှင့်အစေ့များနှင့်အတူဤသည်ပိုမိုတင်းကြပ်စွာငါ၏အ starter အထုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အစတွင်အရသာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ဆီနှင့်အစေ့များသည်ကျန်းမာသောလူနေမှုဘ ၀ အတွက်ကျွန်ုပ်၏အစပျိုးအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ငါအရသာအကြောင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးစိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ငါဖျော်ရည်နဲ့ရောလိုက်ပြီးမြည်းစမ်းလို့မရဘူး။ ဒါဟာသင့်ကိုမနက်ခင်းမှာကောင်းမွန်စေတယ်။